नेपाल बैंक र सिद्धार्थ बैंक को कल डिपोजिटको सीमा भन्दा बढी: राष्ट्र बैंकले जिम्मा लिनु पर्दछ कि पर्दैन !! - Aathikbazarnews.com नेपाल बैंक र सिद्धार्थ बैंक को कल डिपोजिटको सीमा भन्दा बढी: राष्ट्र बैंकले जिम्मा लिनु पर्दछ कि पर्दैन !! -
नेपाल बैंक ले राष्ट्र बैंकको नीति विपरित कारोबार गरेका छन् केन्द्रिय बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी कल निक्षेप संकलन गरी कारोबार गरेका हुन् गर्भनर साब हेक्का होस् ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले स्वीकार गर्ने कुल निक्षेपको मा १० प्रतिशतभन्दा बढी कल निक्षेपको हिस्सा कायम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर नेपाल बैंक को कुल निक्षेपमा कल निक्षेपको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा बढी छ भन्दा फरक पर्दैन । ।
नेपाल बैंकले गत बैशाख मसान्तसम्म कुन १ खर्ब ५९ अर्ब ३२ करोड ६० लाख रुपैयाँ कुन निक्षेप संकलन गरेको थियो । बैंकले सो अवधिमा कुल निक्षेपको ११.०१ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँ कल निक्षेप संकलन गरेको छ ।
यस बाहेक एभरेष्ट बैंक, सिद्धार्थ बैंक र बैंक अफ काठमाण्डुले समेत कुन निक्षेपमा कल निक्षेपको हिस्सा ९ प्रतिशतको हाराहारीमा राखेर कारोबार गरेका छन् ।
बैशाख मसान्तसम्म एभरेष्ट बैंकले कुल १ खर्ब ५३ अर्ब ८१ करोड ९० लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । कुल निक्षेपमा बैंकले ९.५३ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ६५ करोड २० लाख रुपैयाँ कल निक्षेप संकलन गरेको छ ।
सिद्धार्थ बैंकले बैशाख मसान्तसम्म कुल १ खर्ब ७१ अर्ब ८३ करोड ७० लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । सोअवधिमा बैंकले कुल निक्षेपको ९.५२ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ३६ करोड ७० लाख रुपैयाँ कल निक्षेप संकलन गरेको छ । साथै, सो अवधिमा बैंक अफ काठमाण्डूले ९७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कुल निक्षेप संकलन गरेकोमा सोको ९.१६ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ९५ करोड ७० लाख रुपैयाँ कल निक्षेप संकलन गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन । ।
एनआईसी एशिया लघुवित्त र स्वदेशी लघुवित्त मर्जर हुने
“भ्यालेन्टाइन डे”को अवसरमा गरगहना खरिदमा १२ महिनाको भुक्तानी अवधिमा २ किस्ता छुट